DAAWO: Siciid Deni “November 2018, Yaan la hadlin cidna laga yeeli maayo, Jan 2020-ka Qofna Yuusan Dhaliilin Dawladda”
GAROOWE(P-TIMES)- Puntland ayaa 22 sanno ka dib Maxkamad la horkeenay Odayaal, Siyaasiin & Aqoonyahano ka hor yimi aragtida Madaxweynaha maamulkaas Siciid Deni, waxaana dadkaas la maxkamadeeyey lagu xukumay Xabsi iyo Ganaax lacageed, ka dib markii lagu eedeeyey in ay Madaxda dawladda dhaliileen sidaas oo kalena ay dadweynaha fariimo u direen.
Maxkamadda ayaa amartay in Ganaax lacageed iyo Xabsigaba ay Odayaashan marayaan, taas oo ka dhigan in lagu helay Kicin Dadweyne oo kamid ah qodobadii ay adeegsan jirtay Xukuumaddii Kacaanka ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa 23kii November sannadkii 2018-kii, markii uu u ordayay Xilka Madaxweyne-nimada ka balan-qaaday isla magaalada Boosaaso in aan cidna loo xiri doonin aragtideeda siyaasadeed.
Siciid Deni oo markaas musharax ahaa ayaa ka xumaa xarig ay Xukuumaddii Cabdiweli Gaas u geystay Nabadoon Cabdulqaadir Xarago oo kamid ahaa Nabadoonada gobalka Barri, sida adagna uga soo horjeeday Xukuumadaas.
Mr, Deni ayaa sannad ka dib bilaabay xirida iyo caburinta cid kasta oo kasoo horjeeda Aragtidiisa, taas oo muujinaysan in Madaxweynuhu si cad uga hor yimi hadalkisii uu ku galay tartanka doorashada.
Madaxweyne Deni ayaa ogolaa in la dhaliilo Xukuumadda, isagoo kasoo horjeeday in dawladnimadu ay noqoto mid ay ka taliyaan oo kaliya dad kooban, sidas oo kalena qol mugdi ah lagu maamulo howlaha Xukuumadda ee dalka.
Laakiin sannad ka dib, Madaxweynaha Puntland ayaa lagu eedeynayaa in isaga oo ay wehliyaan sadex kamid ah saxiibadiisa siyaasadeed ay gaaraan go`aamada u gaarka ah, sidaas oo kalena aysan cid kale talaba waxba ka siinin, ilaa ay bilaabeen in weerar lagu qaado baarlamaanka oo la diido la xisaabtamka Xukuumadda.
Ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ayaa ka walaacsan xaaladda Xoriyada hadalka ee Puntland, waxayna dhawaan sheegeen in ay ka welwelsan yihiin xariga lagu hayo Odayaal, Waxgarad, Aqoonyahan & Siyaasiin ay Madaxtooyadu amartay xarigooda oo lagu xiray magaalada Boosaaso.